Dargaggoonni Magaalaa Awwadaay irraa batii 10 dura ukkaamfamanii Dirree Dhawaatti hidhaman dararaa hamaa keessa kan jiran tahuu maatiin isaanii himan - NuuralHudaa
Dargaggoonni Magaalaa Awwadaay irraa batii 10 dura ukkaamfamanii Dirree Dhawaatti hidhaman dararaa hamaa keessa kan jiran tahuu maatiin isaanii himan
Waggoottan dabran fincila ummanni biyyattii keessatti geggeessaa turan hordofuun, mootummaan duraan biyya bulchaa ture dargaggoota heddu mana hidhaatti guuraa turuun ni yaadatama. Jijjiirama biyyattii keessatti jalqabameen namoonni kumaatamaan lakkaahaman guutuu biyyaattii hidhaa irraa kan lakkifaman tahunis ni beekama. Haata’uu malee dargaggoonni 43 tahan kan ji’a kudhan dura magaalaa Awwadaay irraa hidhaman hanga har’aatti mana hidhaa magaalaa Dirree Dhawwaa keessatti dararamaa jiraatu maatiiwwan hidhamtoota nuuf himan.
Haaati Ijjooleen isii lama irraa hidhaman akka nuf himtetti :
“Ijjooleen kunnin hidhamanii mana murtii deddeebifaman, garuu hanga ammaatti murtiin irratti hin keennamne. Yeroo namoonni badii gurguddaan hidhamanii turan hundi hidhaa irraa lakkifamutti jiran kanatti, Ijjooleen keenya mana hidhaa keessati dararama jiru. Jijjiiramni kun hanga ammaatti waan nu bira gahe hin fakkaatu, qaamoota adda addaatti iyyannoo dhiheefannee nama nu dhagahu argatu hin dandeenye. Ammas kunoo gara Finfinnee deemnee waajjira muummicha ministeeraa fi Biiroo prezdaantii naannoo Oromiyaa jirra, haata’u malee qaama nuu dubbisu argatu hin dandeenye” jechuun nuuf himte.
Namoota hidhaa irra jiran kanneen jidduu dubartiin da’ima waliin hidhamtee fi kan achi keessatti Opiraasiyooniin deesse kan argaman tahuu maatiiwwan hidhamtootaa nuuf himanii jiru. Namoonni hidhaman kunniin dhiira 40 fi dubartoota 3 tahuunis beekameera.
October 19, 2020 sa;aa 6:29 pm Update tahe